Lighthouse View -enye igumbi lokulala Scarborough
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguAnne
• Indawo esembindini enombono omangalisayo wolwandle weLighthouse, Harbor kunye nolwandle.
• Indawo entsha ehlaziyiweyo
• I-SMART TV kuquka iSky TV.
• khangela ukungena ngokuzinceda
• Ukucoca okuphuculweyo
• Ipakethe yolwamkelo iquka iti/ikofu/ubisi neswekile, ijusi, iti yezityalo, imidumba yobisi lwesoya, iziqholo kunye neoli.
Indlu ye-Lighthouse View inombono omangalisayo ovela kwigumbi lokuphumla phezu kwe-Lighthouse, i-Harbour kunye nolwandle. Indawo yokuhlala inegumbi lokuphumla / ikhitshi, igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elahlukileyo. Indawo isandula ukuhlaziywa ngokupheleleyo kwaye yeyangoku kwaye inomoya, ibekwe kwibala elizolileyo lembali elineentambo elisusela kwiminyaka yoo-1700. Umbindi wedolophu kunye nolwandle zombini zihamba imizuzu emi-2, zinezixhobo ezibandakanya ii-pubs, iivenkile kunye neeresityu zonke ezikumgama osondeleyo wokuhamba.
Ifriji yeLamona with ice box
IProspect Place ikwintendelezo eyimbali eyenziwe ngamatye eyaqala emva phayaa ngeminyaka yoo-1700. IBlue Bell Inn endala, malunga no-1776, eyaziwa kamva njengeHotele yeBell ngoku iyibhloko yeeflethi ezikufuphi neProspect Place. Ngemini yayo iBell Hotel yayiyenye yeendawo zokuqeqesha eziyintloko zaseScarborough. I-Bell ayizange ivumele kuphela abo babeze kusampula amanzi e-Spa kodwa yayiyisikhululo somqeqeshi we-Royal Mail wemihla ngemihla eYork, phakathi kwezinye iinkonzo zokuqeqesha eziqhelekileyo.
Isikhumbuzo seentsuku zoqeqesho ezixakekileyo sisenokufumaneka kwiProspect Place. Qaphela izitena ezinqamlekileyo eludongeni lokugqibela lweNombolo yesi-7, apho abaqeqeshi abangakhathaliyo ngamanye amaxesha babewujonga kakubi umgama. Izitali zamahashe apho zimi apho inani 6 kunye ne-6A Prospect Place ngoku zimiyo. Kunye, iBell Hotel kunye neProspect Place zenze indawo ekhethekileyo ye18th enclave kumda wendawo yeDolophu eNdala.
Ifumaneka kwifowuni kwaye njengoko sihlala kufuphi nepropathi esikhoyo xa kuyimfuneko.